Life is full of surprises zvekuti dzimwe nguva unoshaya kuti zvirikufamba sei.
Ndiri mumwe wevanhu vakabva kuZim kudhara ndinogara zvangu ku Kyalami Estate, kanzvimbo kari quiet apa kakazara varungu. Mumwe musi ndichibva hangu kubasa ndakaita kaminor accident but mota yakabva yaita ma1 zvekuti ndainge ndakushandisa mataxi, problem yaizovapo ndeyekufamba kubva pagate kuyenda pamba pandaigara paitova nekamufambo.Zvamunoziva kuti vamwe varungu vanongotya mabhoyi ndaizama kumisa vanogara imomo kuti vandisiyewo close to my house but vaingopfuura kunge vasiri kundiwona.
Ndichifamba hangu slowly ndaita give up kumisa vanhu pakabva pamira imwe mota pamberi pangu yaifamba nemumwe musikana murungu airatidza kuti ndewe chidiki ndingangoti she was 24 years old apa aifamba be Audi A5, ndakasvika paari ndichitya ndokubva ati get in. Ndakapinda ndokubva ndati “Hi, I am Collin” , akapindura akati I am Tracy. Ndakabva ndati thanks for the ride this short walk kills me, akabva aseka zvikanzi I see you don’t like a bit of exercising, ndikabva ndaseka hangu.
Takasvika pamba pake ndikaburuka ndichiti thanx apa aigara panext pangu apa I didn’t know it. Iye akaratidza kuti akatombondiona but inini didn’t know anything about her.Ndakamuti thanx for the lift maybe one day I will invite you for dinner.Akabva anditi wow I am actually having guests tomorrow if you want to join ndikati I would love to join you. I have always had a fantasy yekusvira murungu kana even more on the sameday.Ndainge ndakutofunga 3 some ini ndisati ndakuziva maguests acho kuti vanhu vakaita sei.Zuva rakasvika ndikabva ndaenda kumba kwaTracy ndakabata kabottle ke Nederberg Rose wine.She was happy to see me ndichibva ndapinda ndikawana mune shamwari dzake Michael na Candice, I greeted them tichibva tambotanga kuita nyaya tisati tadya, who would have known kuti hushamwari huno simbiswa nekudya.
Takataura hedu in general ndipo pandakaziva kuti Tracy was from Zim also ainge akakurira kuMazowe but ainge ava ne 6 years awuya kuSA, after that we had dessert then takazowonekana ndakuyenda kunorara.Tracy akabva anditi see you tomorrow hope you can cook sadza coz i haven’t had it in a long time and I miss it.Ndakasekerera ndikati don’t worry ndinogona kubika, ndikabva ndayenda kumba hangu. Magwana acho ndakayenda kuYeoville market kunotsvaga maVegs ekuZim chaiwo coz ndaida kuti anyatsoita kunge ambodzokera ikoko for a while.Ndakasvika ndikatanga kubika sadza rine beef nemaVegs.
Ndichingopedza after about 15mins ndakanzwa knock padoor ndikaziva kuti Tracy asvika, ndakavhura door achibva apinda apa mapfekero aayinge akaita ha Doctor, ndakangoti you are looking good iye ndokungoti thanx. Takagara pasi tikambobvunzana about zuva redu and then akayenda neni kuKitchen kuti tinopakura, tapedza takagara patable tichibva tadya, chikafu chainaka ichocho zvekuti Tracy akaramba kuti ndini ndabika.
Tapedza kudya takayenda kunogara kulounge Tracy achibva ati whats for dessert apa ndifunge kuti ndainge ndisina kana dessert or kaice cream zvako.Ndakamuudza Tracy ndokubva ati too bad for you inini I know what I want for dessert apa ainge akatarisa panberi pangu.Ndikabva ndati whats that, akasekerera akanditarisa zvikanzi you will see, munhu akasimuka pacouch achibva apfugama pamberi pangu ndokubva ati “May I” ndikati go ahead, akaburitsa mboro yangu mujean apa yaiyita kunge kakatorara zvayo, akatanga kuibonyora zvishoma nezvishoma ndichiwona ichisumuka kusvikira yaita kunge simbi.
Ndakayamwiwa ndichisvetwa mboro kuita kunge huronyo hwese huchapera mukati.Ndakanakirwa zvekuti ndakabva ndazotundira mumuromo make, ndakamuudza kuti ndainge ndakuda kutunda ndikafunga kuti munhu achabvisa mboro mumuromo asi akaisiya ndokumedza huronyo hwese, haana kumira akaramba achibonyora mboro yangu kusvikira ndazomumisa ndichibva ndamugarisa pacouch ndikabva ndatanga kusveta beche apa rainge rakagerwa kuita kunge ainge azviita knowing kuti arikuda kusvirwa.
Mwana akayuwira kusvika atunda. Takazosimuka kuyenda kubedroom ndiko kwandakanoita kusvira kusvika mangwana, ndakakoira Tracey akaridza mhere nekunakirwa. Akatanga achichemerera kusvika akungoti ah ahh ahhha hhaaaahhhh zvirikunaka kani, akataura neshona and haana kugumira ipapo.Yakazondipedza hanzi Kodza wakapenga mhani svirisa kani, ndakamboita freeze ndichida kuti ndinzwe kuti ndainyatsonzwa zvakanaka here, ndipo paakati ko wamirirei.
Akatunda kakawanda ndichibva ndazotundawo, ndipo paakazoti asi you were shocked kuti ndinotaura shona, ndikati yaaa especially the things you were saying in the moment.
Updated: March 1, 2018 — 6:24 pm